Sidee Guul Loo Gaadhaa? - Daryeel Magazine
Sidee Guul Loo Gaadhaa?
Nin layiraahdo Dr. Richard wuxuu yiri, maalin ayaan Diyaarad saaraa, agtaydana waxaa fadhiday gabar yar oo dhigata iskoolka sare, kana soo jeeda qoys Faqiir ah. Waxayna aadna u jeclayd inay wax ka badasho dhibka haysta qoyskeeda. Waxayna iwaydiisay; sidee loo gaaraa Guul?? Ana waxaan dareemay xanuun badan, maxaa-yeelay ma awoodin inaan siiyo jawaab sax ah oo tafa tiran. Waxaan go’aansaday in markaan Diyaaradii ka dago aan raadiyo dad gaaray Guul iyo Horumar, aana weydiiyo sidee loo gaaraa Guul? 7sano kadib iyo 500, oo waraysi oon ka qaaday dad guulo sare gaaray waxaa iisoo baxday in guul lagu gaaro arimahan soo socda:
Ma rabtaa Guul iyo Farxad? Tuko Salaada Sidee Caado Loo Dhigtaa Wax Akhrinta? Sidee Se La isku Jeclaysiin Karaa? Sidee Waqtiga Loo Qorsheeyaa? Sidee Loo Noqdaa Arday Wanaagsan Oo Guulaysta?